UPDATE: Ciidamo ka tirsan Puntland oo lagu weeraray bartamaha Boosaaso & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Ciidamo ka tirsan Puntland oo lagu weeraray bartamaha Boosaaso & Wararkii...
UPDATE: Ciidamo ka tirsan Puntland oo lagu weeraray bartamaha Boosaaso & Wararkii ugu dambeeyay
Boosaaso (Halqaran.com) – Kooxo hubeysan ayaa weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo xilligaasi marayay bartamaha magaalada Boosaaso, sida aynu wararka ku helnay.
Dableydan hubeysan ayaa weerartay Ciidan uu watay Sarkaal ka tirsan Ciidanka Ilaalada Canshuuraha Berriga Puntland.
Kooxahan ayaa looga shakisan yahay, in ay ka tirsan yihiin Daacish Sidda ay sheegeen Hay’addaha Ammaanka maamulka Puntland.
Is-rasaasaynta dhexmartay sarkaalkaasi oo magaciisa lagu sheegay Cabdiweli Abshir Cabbaas iyo dableeyda hubaysan, waxaa ku dhintay hal ruux oo ka soo jeeda Qowmiyadda Oromada ee Itoobiya, kaasi oo ku sugnaa meel aan ka fogayn halka weerarku ka dhacay.
Axaddii la soo dhaafay, laba askari oo ka tirsan Ciidamada Puntland, ayaa lagu dilay bartamaha magaalada Boosaaso, kadib markii ay rasaas la beegsadeen dableey hubaysan, waxaana weerarkaasi mas’uuliyaddiisa sheegatay kooxda Daacish.
Kooxo hubeysan oo weerar ku qaaday ciidamada Puntland magaalada Boosaaso